Imibandela Yokusebenza - JPEG.to
Imigomo yesevisi ye-JPEG.to
Ngokufinyelela iwebhusayithi kuwebhu ku- https : Uma ungavumelani nanoma yimiphi yale migomo, uvunyelwe ukusebenzisa noma ukufinyelela leli sayithi. Izinto eziqukethwe kule webhusayithi zivikelwe umthetho osebenzayo we-copyright nophawu lwentengiso.
Kunikezwe imvume yokulanda okwesikhashana ikhophi elilodwa lezinto zokwakha (imininingwane noma isoftware) kuwebhusayithi yeJPEG.to ukuze ubuke izinto zokuhamba zomuntu siqu, ezingezona ezentengiso kuphela. Lokhu kunikezwa kwelayisense, hhayi ukudluliswa kwesihloko, futhi ngaphansi kwaleli layisense ngeke:
sebenzisa izinto ezisetshenziselwa noma yiziphi izinhloso zentengiso, noma noma yisiphi isikhangiso esenziwe ngumphakathi (ezentengiso noma ezingezona ezentengiso);
ukuzama ukubola noma ukubuyisela emuva emuva kunjiniyela noma iyiphi isoftware equkethe kuwebhusayithi yeJPEG.to;
dlulisela izinto komunye umuntu noma 'esibukweni' izinto kunoma iyiphi enye iseva.
Le layisense izonqanyulwa ngokuzenzakalelayo uma wephula noma iyiphi yale mikhawulo futhi ingahle inqanyulwe iJPEG.to nganoma yisiphi isikhathi. Lapho usuqedile ukubuka kwakho lezi zinto noma ekuphelisweni kwale layisense, kufanele uchithe noma yiziphi izinto ezilandiwe onazo noma ngabe zisefomini ye-elekhthronikhi noma ephrintiwe.
Izinto zokwenziwa kuwebhusayithi yeJPEG.to zinikezwa ngesisekelo se-'as is '. I-JPEG.to ayenzi siwaranti, iveziwe noma iveziwe, futhi ngalokhu iyalahla futhi ibeka phansi yonke eminye iwaranti kufaka, ngaphandle komkhawulo, ukuqinisekiswa okuqinisekisiwe noma imibandela yokuthengiswa, ukuqina kwenhloso ethile, noma ukwephulwa kwempahla yengqondo noma okunye ukwephulwa kwamalungelo.
Ngaphezu kwalokho, i-JPEG.to ayisebenzi noma iveze izethulo eziphathelene nokunemba, imiphumela engaba khona, noma ukuthembeka kokusetshenziswa kwezinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yayo noma ngenye indlela ephathelene nezinto ezinjalo noma kunoma yiziphi izingosi ezixhumene nale sayithi.
Kute umcimbi lapho i-JPEG.to noma abahlinzeki bayo bezokhokhiswa khona noma yimuphi umonakalo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukulimala kokulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yokuphazamiseka kwebhizinisi) okuvela ekusebenzeni noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto eziseJPEG.to Iwebhusayithi, noma ngabe i-JPEG.to noma ummeli ogunyaziwe we-JPEG.to azisiwe ngomlomo noma ngokubhala ukuthi kungenzeka lowo monakalo. Ngoba ezinye izinkantolo azivumeli umkhawulo kuma-warredties akhonjisiwe, noma umkhawulo wesibopho sokulimala okubangelwa noma okwenzekile, lokhu kukhawulelwa kungenzeka kungasebenzi kuwe.
5. Ukunemba kwezinto zokwenziwa
Izinto ezibonakala kuwebhusayithi yeJPEG.to zingafaka phakathi amaphutha wezobuchwepheshe, wokushicilela, noma wezithombe. I-JPEG.to ayiqinisekisi ukuthi noma yiziphi izinto ezisetshenziswayo kuwebhusayithi yayo zinembile, ziphelele noma zamanje. I-JPEG.to ingenza ushintsho ezintweni eziqukethwe kuwebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuqaphela. Noma kunjalo i-JPEG.to ayenzi ukuzibophelela ukubuyekeza izinto zokwakha.
I-JPEG.to ayibukezanga zonke izingosi ezixhunywe kwiwebhusayithi yayo futhi ayinasibopho sokuqukethwe kwanoma yiliphi isayithi elixhunyiwe. Ukufakwa kwanoma yisiphi isixhumanisi akusho ukuthi kuvunyelwe i-JPEG.to yesayithi. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi enjalo exhumekile kusengozini yomsebenzisi.
I-JPEG.to ingabuyekeza le migomo yesevisi yewebhusayithi yayo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuqaphela. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuboshwa yinguqulo yamanje yamanje yale migomo yesevisi.
5,284 ukuguqulwa kusukela ngo-2020!